ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ဘယ်လိုစားသောက်သင့်လဲ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ » ဆေးကုသမှုခံယူပြီးနောက် ဘယ်လိုစားသောက်သင့်လဲ
ကျန်းမာစွာစားသောက်ခြင်းက ဆိုးကျိုးတချို့ရှိတဲ့ ကင်ဆာကုသမှုကနေပြန်ကောင်းဖို့ အနားယူရာမှာအရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း သို့မဟုတ် တက်ခြင်းက ကုသမှုတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပါ။ ဒါက သင့်ရဲ့နာလန်ထမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် တခြားကျန်းမာရေးပြသနာတွေကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက် ဒီလိုနာလန်ထချိန်မှာ ကျန်းမာအောင် ဘယ်လိုစားသောက်ရမလဲ သိထားသင့်ပါတယ်။
အစားအသောက် ဘေးကင်းမှုကို အာရုံစိုက်ပါ။
ဘေးကင်းတဲ့စားသောက်မှုက ကင်ဆာရောဂါကုသနေတဲ့သူတွေအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုသတ်တဲ့ ဘယ်ကုသမှုမဆို သင့်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကို အားနည်းစေပြီး ရောဂါပိုးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေ၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ မှိုရောဂါတွေဝင်ဖို့ လွယ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကိုယ်ခံအားက အဲဒီအရာတွေက အရင်ကလောက် မတိုက်ခိုက်နိုင်သေးပါဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့ ရောဂါပိုးဝင်ပြီး သင့်ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုရောဂါပိုးဝင်နိုင်ချေကိုလျှော့ချဖို့အတွက် သင်ကျန်းမာဘေးကင်းစွာ စားသောက်ဖို့လိုပါမယ်။ သင့်လက်ကို အစာမစားခင်နဲ့ အစာကိုပြင်ဆင်နေချိန်မှာဆေးထားဖို့ သတိရပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အသီးတွေကိုမစားခင် သူတို့ကိုသေချာဆေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ဒါ့အပြင် အစားအစာတွေကို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့သိမ်းဆည်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာ – ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ အသားစိမ်းကို တခြားအစာတွေရဲ့အဝေးမှာထားရပါမယ်။ သင့်အစားအစာတွေကိုလည်း ကျက်အောင်ချက်ဖို့သတိရပါ။
ကုသမှုအပြီး ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းက သင့်ကိုအဝလွန်စေနိုင်ပြီး တခြားကျန်းမာရေးပြသနာတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာ အရမ်းမြန်ခြင်းက သင့်နာလန်ထူမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကယ်လိုရီကို ထိန်းညှိဖို့လိုပါတယ်။ သဘောက အစားအသောက်တွေဆီက သင်စုပ်ယူလိုက်တဲ့စွမ်းအင်ကို ထိန်းညှိတာပါ။ ဒါက အစားအစာတွေကရတဲ့ ကယ်လိုရီတွေကိုတွက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပြန်ထွက်သွားတဲ့ ကယ်လိုရီတွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ အစာကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် အများကြီးမစားမိအောင်တော့ ဂရုစိုက်ပါ။ သင်အစာစားနေချိန် အာရုံမလွင့်စေပါနဲ့။ သင်ဘယ်လောက် စားနေသောက်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားနေရပါ့မယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်အနေနဲ့ အနည်းငယ်သာ စားသင့်ပြီး ကယ်လိုရီနည်းတာတွေကိုရွေးစားသင့်ပါတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ သင်ကယ်လိုရီဘယ်လောက်လိုနေလဲဆိုတာသိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အစားအသောက်ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီမှာ သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် အစားအသောက်ပုံစံကို အကြံတောင်းနိုင်ပါတယ်။
အသီးအရွက်တွေနဲ့ ဂျုံတွေဆန်တွေက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ သင်စားနေကျအစာရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ အစားထိုးပါ။ သင့်အစာအစာထဲမှာပါတဲ့ အသီးအရွက်တွေ အမျိုးအစားကွဲလေကောင်းလေပါဘဲ၊ ဥပမာ – အစိမ်းနက်နက်၊ အနီ၊ လိမ္မော်ရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပဲတောင့်နဲ့ ပဲစေ့တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆီနည်းတဲ့ ပရိုတိန်းများ၊ အထူးသဖြင့်ပင်လယ်စာများ။
အနီရောင်အသားတွေဖြစ်တဲ့အမဲ၊ဝက်တွေအစားပင်လယ်စာ၊ကြက်၊ဘဲနဲ့ဂရိဒိန်ချဉ်၊ဥများ၊ပဲတောင့်များ၊ ပဲမှထွက်သည့်ထုတ်ကုန်များ၊ဆားမပါတဲ့အစေ့အဆံများတဲ့အစာတွေကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ပင်လယ်စာတွေကအာဟာရဓာတ်မျိုးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပါ။သူတို့ကနှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တပတ်ကိုပင်လယ်စာ ၈ အောင်စထက် ပိုစားသင့်ပါတယ်။ အသင့်စားအသားတွေ အစားအစာတွေကို ကန့်သတ်ထားပါ။ ဥပမာ – ကြက်ဝက်အူချောင်း၊ အသားဘူးများ၊ ဟော့ဒေါ့များ၊ ဒါတွေက ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းမြင့်စေပါတယ်။
သင်ခံစားရတာ သက်သာလာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကို ကျန်းမာစွာစားသောက်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပါ။ ကောင်းမွန်စွာစားသောက်ခြင်းက သင့်ရဲ့ခွန်အားကိုပြန်ပြည့်စေပြီ၊ တစ်ရှူးတွေကိုပြန်တည်ဆောက်ပေးတဲ့အပြင် သင့်ကိုနေလို့ပိုကောင်းလာစေပါတယ်။ သင့်နာလန်ထမှုကို အထောက်အကူပေးပြီး ကုသမှုရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါသည်တစ်ယောက်နဲ့ စောင့်ရှောက်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့အချက်၅ချက်
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇနျနဝါရီ 22, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇနျနဝါရီ 22, 2018
Healthy eating after treatment. https://www.breastcancercare.org.uk/healthy-eating-after-treatment. Accessed December 10, 2016.
Prevention and Healthy Living. http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/prevention-and-healthy-living/diet-and-nutrition/nutrition-recommendations-during-and-after-treatment. Accessed December 10, 2016.
Cancer survivors: Care for your body after treatment. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cancer/in-depth/cancer-survivor/art-20044015. Accessed December 10, 2016.
Be Healthy After Treatment. http://www.cancer.org/treatment/survivorshipduringandaftertreatment/behealthyaftertreatment/index. Accessed December 10, 2016.
Food and Cancer Prevention. http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/prevention-and-healthy-living/diet-and-nutrition/general-nutrition-recommendations